नेपाल आईडल सज्जा चौलागाईंको बुबा रुँदै मिडियामा, सम्झीए पुराना दिन ! आफ्नै घरमा बस्ने ठूलो सपना (भिडियो) – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Video/नेपाल आईडल सज्जा चौलागाईंको बुबा रुँदै मिडियामा, सम्झीए पुराना दिन ! आफ्नै घरमा बस्ने ठूलो सपना (भिडियो)
हजारौंबाट छानिएर उत्कृष्ट ३ मा पर्न सफल भएका उनीहरूले पाएको भोटको आधारमा विजेता चयन गरिएको हो । विजेताले ‘नेपाल आइडल-३ को उपाधिसहित ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी फस्ट रनरअपले १५ लाख र सेकेन्ड रनरअपले पाँच लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्।अन्य हप्ताको कार्यक्रम जस्तै शुक्रबारको कार्यक्रममा सीमित मानिस र दर्शकको उपस्थितिमा नेपाल आइडल-३ को विजेता घोषणा गरिने प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेलले जानकारी दिए।
भर्खरै हेर्नुहोस् त्रिभुवन विमानस्थलमा चेकजाँचका क्रममा लगेज खोल्दा प्रहरीको होस् उड्यो २ जना पक्राउ !